Iziqhamo zeMveliso yeeNqanawa - China Iziqhamo eziQinisekisiweyo Abavelisi, abaXhasi
I-orange ye-mandarin ekheniweyo luhlobo lwesithelo esenziwe kwii-orenji ze-mandarin. Ucebile kwi-vitamin C eyongezelelweyo, umzimba womntu ufuna i-fiber, i-carotene njalonjalo. Ingatyiwa kwangoko emva kokuvula isiciko okanye emva kokufudumeza. Ehlotyeni elishushu, iiorenji ze-mandarin ezisemathinini ziya kungcamla ngcono nangakumbi emva kokuba zifrijiwe. Iziqhamo zethu ezinamathanga ziveliswa kumzi-mveliso wale mihla onemigangatho engqongqo, akukho zongezo okanye izinto ezisigcinayo. Iimveliso zethu zeziqhamo ezinamathanga zithunyelwa kumazwe angaphezulu kwama-20 kwihlabathi liphela, kwaye iiorenji ze-mandarin ezisemathinini zezona mveliso zithandwa kakhulu.
Iinkonkxa iziqhamo ityebile ngokuxhasa ivithamin C, umzimba womntu ufuna ifayibha, icarotene njalo njalo. Ingatyiwa kwangoko emva kokuvula isiciko okanye emva kokufudumeza. Ehlotyeni elishushu, iziqhamo ezakhiwe enkonkxiweyo ziya kungcamla nangakumbi emva kokuba zifrijiwe. Iziqhamo zethu ezinamathanga ziveliswa kumzi-mveliso wale mihla onemigangatho engqongqo, akukho zongezo okanye izinto ezisigcinayo. Iimveliso zethu zeziqhamo ezisenkonkxweni zithunyelwa kumazwe angaphaya kwamashumi amabini kwihlabathi liphela, kwaye ipesika etyheli enkonkxiweyo yeyona mveliso ithandwayo.
Ipesika etyheli enkonkxiweyo kwisiraphu elula luhlobo lwesithelo esenziwe ngepesika etyheli. Ucebile kwi-vitamin C eyongezelelweyo, umzimba womntu ufuna i-fiber, i-carotene njalonjalo. Ingatyiwa kwangoko emva kokuvula isiciko okanye emva kokufudumeza. Ehlotyeni elishushu, iipesika ezimthubi enkonkxiweyo ziya kungcamla ngcono nangakumbi emva kokuba zifrijiwe. Iziqhamo zethu ezinamathanga ziveliswa kumzi-mveliso wale mihla onemigangatho engqongqo, akukho zongezo okanye izinto ezisigcinayo. Iimveliso zethu zeziqhamo ezisenkonkxweni zithunyelwa kumazwe angaphaya kwamashumi amabini kwihlabathi liphela, kwaye ipesika etyheli enkonkxiweyo yeyona mveliso ithandwayo.
Ikhukhi yeLadyfinger, Umtya weHawthorn, Iibhiskithi zaBantwana, Intonga yeBhontshisi entsha, Iipakethi zesosi yeSoy, Ukutya amandongomane anetyuwa,